Ikhaya Imikhiqizo DataNumen Outlook Repair Ithuluzi Lokulungisa Ibhokisi lokungenayo Lilenga
Ithuluzi Lokulungisa Ibhokisi Lemilayezo Engenayo Lilenga Lapho Kulungiswa Amafayela we-PST Akhohlakele noma Alimazayo
Uma usebenzisa i-Outlook Inbox Repair Tool (Scanpst.exe) ukulungisa ifayili elonakele noma elonakele lefayela le-Outlook (PST), esikhundleni sokwenza umsebenzi wokulungisa, ithuluzi lilenga ngokungapheli futhi aliphenduli imiyalo yomsebenzisi. Uma uvula i-Windows Task Manager, uzothola ukuthi isimo sohlelo lokusebenza “asiphenduli”. Uma uvala uhlelo ngokungajwayelekile bese u-restarUkulungisa kabusha ifayili elifanayo, uzohlala uthola imiphumela efanayo.
Inkohlakalo noma ukulimala kwefayela le-PST kusinda kakhulu futhi kuyinkimbinkimbi. Lapho Ithuluzi Lokulungisa Ibhokisi Lemilayezo Engenayo (i-Scanpst) lizama ukulungisa ifayili, lizongena kumaluphu afile ngokungapheli futhi ngeke lisakwazi ukulungisa ifayili.